तनाव कम गर्नुका साथै अन्य फाइदाको लागि चिकेन
आइतबार, ०९ कार्तिक, २०७७
भारतीय मिडिया लेख्छ : गोयलको भ्रमण नेकपाभित्रको अन्तरविरोध मिलाउनलाई हो
दसैँमा कस्तो मेकअप गर्ने ?
प्रधानमन्त्री र ‘रअ’ प्रमुखबीचको भेट मर्यादा विपरित : प्रवक्ता श्रेष्ठ
धरानमा ६२ वर्षीय संक्रमित पुरुषको मृत्यु
रियलले बार्सिलोनालाई हराउँदा रोनाल्डो खुसी
भारतले एकलौटी रुपमा खोल्यो जोगवनी नाका
दसैँको नवौं दिन : महानवमी पर्व मनाइदै
दुई पटकसम्म पोजेटिभ रिपोर्ट आएका संक्रमितको मृत्यु
मोरङमा कात्तिक १५ गतेसम्म निषेधाज्ञा, के गर्न पाइने के नपाइने ?
पर्याप्त ‘भिटामिन डी’ पाउन कति समय घाममा बस्ने ?
मङ्गलबार, ३० बैशाख, २०७७ 0प्रतिक्रिया
विराटनगर, ३० वैशाख । कोरोना भाइरसको कारण, पछिल्लो धेरै दिनदेखि कुखुरा मासु (चिकेन) को सेवन गर्न मान्छेहरू डराइरहेका छन् ।
चिकेनको सेवनले कोरोना भाइरस फैलिन सक्ने डर रहेपनि चिकेन खानाले कोरोना भाइरस फैलिनसक्ने कुराको पुस्टि भएको छैन ।
चिकेनको सेवनले शरीरमा धेरै फाइदाहरू गर्छन् । चिकेनको कुनै पनि परिकार पकाउनुअघि यसलाई राम्ररी सफा गर्नुपर्छ ।
चिकेनमा प्रोटिनको एक राम्रो स्रोत हुन्छ । शरीरको विभिन्न कार्यहरूको सुचारु रूपले कार्य गर्नका लागि पर्याप्त मात्रामा प्रोटिन चाहिन्छ । चिकेन खानुका केही फाइदाहरू :
तनाव हटाउन मद्दत गर्छ : घर वा कार्यालयमा निरन्तर काम गर्दा धेरै प्रकारका समस्याहरूको सामना गर्नुपर्छ र तनाव उत्पन्न हुन्छ । तनाव धेरै हानिकारक हुन सक्छ । चिकेनमा पाइने ट्रिपटोफनले धेरै तनाव कम गर्न मद्दत गर्छ ।
मेटाबोलिज्मलाई सुधार्छ : चिकेनमा भिटामिन-बी पाइन्छ, जसले मेटाबोलिक गतिविधिलाई पनि ठूलो हदसम्म सुधार गर्छ । मेटाबोलिज्ममा सुधार आए पाचन प्रणालीलाई पनि सक्रिय बनाएर धेरै पेटसम्बन्धी रोगहरूबाट जोगाउन मद्दत गर्छ । मेटाबोलिज्ममा सुधार ल्याउन नियमित रूपमा चिकेनको सेवन गर्नुपर्छ ।
बडीबिलडरहरूको लागि फाइदाजनक : ठिक्क मात्रामा चिकेनको सेवनले शरीरमा मांसपेशी निर्माणमा धेरै मद्दत गर्छ ।
प्रतिरक्षा शक्ति बढाउँछ : चिकेनको सेवन गर्नेहरूमा प्रतिरोधात्मक क्षमता अझ प्रबल हुन सक्छ । कुखुरामा इम्यूनोमोडुलेटरी गुणहरू हुन्छन् । जसकारण नियमित रूपमा चिकेनको सेवनलेप्रतिरोध क्षमतालाई अझ मजबुत बनाउन सक्छ ।
कोलेस्ट्रोल घटाउछ : शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढे धेरै प्रकारका स्वास्थ्य जोखिमहरू निम्तिन सक्छ । कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण गर्न चिकेनले धेरै मद्दत पुर्‍याउन सक्छ । कुखुरामा कोलेस्ट्रोल-ब्यालेन्सिंग गुणहरू र नियासिनले पनि कोलेस्ट्रोल कम गर्न सक्रियता साथ काम गर्छ ।
मासु नखानेलाई दसैँमा पनिरको सब्जी बनाउने तरिका
दसैंमा पायल्स भएकाले कस्ताे परिकार खाने ?
मधुमेहका बिरामीले दसैंमा के खाने के नखाने ?